Ny Samsung Galaxy Watch manaraka dia hanana fifandraisana 5G | Androidsis
Na dia zara raha misy aza ny tambajotra 5G any amin'ny tanàna vitsy dia vitsy, ary amin'ireo izay (mbola ao anatin'ny dingana fitsapana) dia tsy misy manerana ny tanàna, dia toa misy ny mpamokatra. Izy ireo dia manizingizina ny handefa ireo fitaovana sy terminal terminal 5G mifanentana aminy, noho ny tombony rehetra atolotray antsika.
Araka ny hitantsika ao amin'ny SamMobile, ny orinasa Koreana Samsung dia miasa amin'ny inona no handimby ny Samsung Galaxy Watch amin'izao fotoana izao, terminal iray izay azo alaina amin'ny kinova Wi-Fi sy Wi-Fi miaraka amin'ny LTE. Na izany aza, ny taranaka ho avy dia hifanaraka amin'ireo tamba-jotra 5G.
Ny laharana maodely ho an'ny fifandraisana Galaxy Watch miaraka amin'ny Wi-Fi dia SM-R820 sy SM-R830, raha ireo andinin-tsoratra ho an'ireo maodely misy fifandraisana Wi-Fi sy LTE kosa dia SM-R825 sy SM-R835. Ireo maodely vaovao misy fifandraisana 5G, izay azontsika vakina ao amin'ny SamMobile ny maodely SM-R827 sy SM-R837.
Raha voamarina ireo tsaho ireo dia afaka mamorona ny Samsung Galaxy Watch manaraka lasa smartwatch voalohany miaraka amin'ny fifandraisana 5G, na dia mahasoa azy aza ankehitriny, rehefa zara raha misy ny tambajotra, dia mihoatra ny fisalasalana ihany.
Ity taranaka vaovao ity dia ho tonga eny an-tsena 4GB fitehirizana ary misy amin'ny loko 3: mainty, volafotsy ary volamena. Amin'izao fotoana izao, tsy misy fampahalalana hanamafisana na handavana raha mbola hankafy ny bezel mihodina ianao ary raha ho hita amin'ny habe roa ihany koa.
Hitanay ny mety hanjavonan'ny bezel mihodina miaraka amin'ny Samsung Galaxy Active, terminal izay manery antsika mifanerasera amin'ny efijery eny na eny raha afaka mampiasa azy. Na izany aza, raha jerentsika fa ny Galaxy Watch range dia manana vidiny lafo kokoa, dia azo inoana fa ity dia hitohy ho iray amin'ireo fiasa mahaliana indrindra atolony raha oharina amin'ireo fantsona misy eny an-tsena ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Samsung Galaxy Watch manaraka dia hanana fifandraisana 5G
Sivana feno sy famolavolana ny Meizu 16Xs